Momba anay - Hebei Weierli Animal Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Hebei Weierli Animal Pharmaceutical Group Co., Ltd, natsangana tamin'ny taona 2001, dia mpanamboatra matihanina manao fikarohana, fampandrosoana, famokarana, fivarotana ary serivisy fanafody biby. Any Shijiazhuang City izahay no misy fidirana fitaterana mety. Weierli Group dia mitazona orinasa efatra, orinasa mpivarotra iray ary orinasa fanandramana iray:
1. Hebei Weierli Animal Farmancy Group Co., ltd (2001)
Ny lalam-pamokarana veterinera lehibe indrindra dia misy ny tsindrona, vovoka, prisam, vahaolana am-bava, takelaka ary famonoana otrikaretina. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa mieritreritra, ny mpiasanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takianareo sy hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Mixer manainga hopper ,. Masinina famenoana mandeha ho azy, milina famonosana mandeha ho azy; Fitaovana fanaraha-maso kalitao dia ahitana HPLC, UV, mpandinika fandrefesana automatique microbial multifunctional, Chambre Constant Climate, laboratoara fanadiovana biolojika tokana olona tokana, Ankoatr'izay, nahazo mari-pankasitrahana GMP izahay, taratasy fanamarinana momba ny fanombanana ny tontolo iainana.
Manaraka hatrany ny fenitry ny GMP foana izahay, manizingizina ny fitsipiky ny "fandaminana mahomby, mianatra ary mandresy fandresena" ary mamokatra fanafody avo lenta, azo antoka ary mandaitra. Ekipa mpivarotra matihanina sy matanjaka no mampitombo ny fizarantsika varotra amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta.
Ny fivarotana tsara any amin'ny tanàna sy faritany rehetra manodidina an'i Shina, ny vokatra dia haondrana any amin'ny mpanjifa any amin'ny firenena Aziatika, Afrikana ary Amerika Afovoany ihany koa. Ary mamarana ny fisoratana anarana any Emirà Arabo Mitambatra, Peroa, Egypt, Nizeria ary Filipina. Raisinay koa ny kaomandy OEM sy ODM. Na ny fisafidianana vokatra amin'izao fotoana izao avy amin'ny katalaoginay na ny fikatsahana fanampiana momba ny injeniera ho an'ny fangatahanao dia azonao atao ny miresaka amin'ny ivon-toeran'ny mpanjifantsika momba ny fepetra takianay. Ny olona Weierli dia afaka mahazo fandresena foana, satria mamorona ny angano amin'ny alàlan'ny haingam-pandeha, mizaha fahendrena amin'ny habakabaka ary mitety ny ho avy amin'ny siansa sy ny teknolojia.